Usoro Leger: Voice of Customer (VoC) Akụkọ Na-arụ Ọrụ | Martech Zone
Usoro Leger awade a ikpo okwu iji nyere ụlọ ọrụ gị na a mma nghọta nke otú gị ahịa ahụmahụ draịva afọ ojuju, iguzosi ike n'ihe na uru gafee gị ụlọ ọrụ.
Igwe okwu ndị ahịa (VoC) nke a na-enye gị ngwaọrụ ndị dị mkpa iji jide nzaghachi ndị ahịa na atụmatụ ndị a:
Nzaghachi Ahịa - Kpọọ nzaghachi ndị ahịa ma nakọta ya site na mkpanaka, weebụ, SMS, na ekwentị.
Nkwupụta na nchịkọta - Nye ihe ọmụma nye ndị ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị n'ụdị ha nwere ike ime ihe. Ghọta nzaghachi ndị ahịa na-enyere gị aka ibute omume ụzọ ma melite arụmọrụ na arụmọrụ.
Iweghachite ndị ahịa - Mmeri enweghi afọ ojuju ndị ahịa na ezigbo oge, kpatara nrịba ama. Jikwaa ma dozie nsogbu ha, soro okwu ha, ma gbanwee ha ka ha bụrụ ndị nnọchi anya na-anụ ọkụ n'obi.
Nkwado na-elekọta mmadụ - Tụgharịa nzaghachi dị mma n'ime mgbasa ozi mgbasa ozi site na ịgba ume maka nkwanye ugwu. Mee ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị dị na ROI, mee ka okwu ọnụ dịkwuo mma, mepụta ohere ịzụ ahịa mmekọrịta ọhụụ, wee too ụtụ.
Nchịkọta ederede - Kọwaa ihe gbasara ahụmịhe nke ndị ahịa gị na mmetụta ha site n’ịtụle azịza mmeghe ha ọsọ ọsọ na mfe site na nhazi Usoro Asụsụ.
Ọrụ Nkwụsị - Leger Metrics na-arụ ọrụ ka ị chepụta, hazie, kesaa ma jikwaa mmemme nzaghachi Voice of the Customer (VoC) na-aga nke ọma. Gaa omimi na ogo nchịkọta na ọrụ nyocha ahịa.
Tags: ahịa nchịkọtanzaghachi ndị ahịaahịa mgbakeịkọ ndị ahịaleger metriknhazi asụsụNlpịkwado mmekọrịta mmadụ na ibe yaederede ederedeoluolu onye ahịa